‘प्रादेशिक अस्पतालको स्तरबृद्धि गर्दैछौं’ - Pradesh Today ‘प्रादेशिक अस्पतालको स्तरबृद्धि गर्दैछौं’ - Pradesh Today
‘प्रादेशिक अस्पतालको स्तरबृद्धि गर्दैछौं’
कोरोना महामारीमा अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न केही समस्या छन् । कोरोनाको त्रासमा कतिपय बिरामी अस्पतालमै आउने गरेका छैनन् भने अस्पतालमा आएका बिरामी पनि असुरक्षित महसुस गर्नु स्वभाविक नै हुन्छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा पनि यसको प्रभाव प¥यो । अस्पतालका सेवा प्रभावित भए । अहिले अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढी छ । अस्पताल उपचारको मुख्यकेन्द्र बन्दै गएको छ । अस्पतालले कोरोना महामारीमा प्रदान गरिरहेको स्वास्थ्य सेवा र जटिलता के छन् ? अस्पतालका प्रमुख डा. सर्वेश शर्मा सँग प्रदेश टुडेले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
अस्पतालले सेवा प्रवाह कस्तो छ ?
चलिरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण अस्पतालको सेवा प्रवाहमा समस्या छैन् । केही समयअघि अस्पतालका केही चिकित्सकसहितमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अस्पतालको सेवा केही दिन ब्रेक भएपनि अहिले निरन्तररुपमा चलिरहेको छ ।
कोरोनाको प्रभावका कारण सेवा अब हामीले प्रभावित हुन दिएका छैनौँ । अहिले पनि दैनिक तीन सयदेखि तीन सय ५० जनासम्मले सेवा लिने गरेका छन् । अलिकति के हो ? भने कम जनशक्तिमा धेरै सेवा दिनुपर्दा समस्या देखिएको छ । तैपनि हामीले सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउने कोसिसमा छौँ । अहिले कोरोनाको प्रभावका कारण पनि सेवालाई रोकेका छैनौँ ।
सेवा लिने बिरामीको संख्या घटेको हो ?
होइन्, त्यस्तो । अस्पतालमा दैनिकजसो सेवा लिने बिरामीको संख्या बढिरहेको छ । अस्पतालमा अहिले पनि टाढा–टाढाबाट सेवा लिन आउने बिरामी छन् । लमहीदेखि रोल्पा, रुकुम, सल्यान, प्यूठानसम्मका बिरामीले सेवा लिने गरेका छन् ।
अस्पतालमा पहिलेको तुलनामा केही सामान्यरुपमा कमि देखिए पनि फेरि पछिल्लो समय सेवा लिनेको चाप बढ्दै गएको छ । अस्पतालको सेवा प्रवाह सुधार हुँदै गर्दा पनि सेवा लिने बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ । तथ्यांक हेर्दा उपचारमा विश्वास गर्नेथलो प्रादेशिक अस्पताल बनेको छ ।
अस्पतालले बिरामी रेफर कत्तिको गर्नुपरेको छ ?
अहिले पहिलेको तुलनामा रेफर गर्ने अवस्था कमी छ । बढ्दै गएको विश्वासलाई थप विश्वसनीय बनाउन हामीले थोरै जनशक्तिमा स्रोत र साधनले सकेजति सेवा दिने गरेका छौँ । केही जटिल प्रकृतिका बिरामीलाई मात्रै बाहिर रेफर गर्नुपरेको छ ।
केही बिरामीका आफन्तले आफै पनि रेफर गर्ने गर्नुभएको छ, यस्तो अवस्थामा मात्रै बिरामी रेफर गर्नुपरेको छ । अन्यथा हामीले सकेजति बिरामीले अन्यत्र सेवा लिन नपरोस् भनेर काम गरिरहेका छौँ ।
अस्पतालमा सेवाहरु के–के छन ?
पक्कै पनि हामीले प्रदान गर्ने सेवा थुप्रै किसिमका छन् । ‘२४सैँ घण्टा आपतकालिन सेवा, ल्याव सेवा २४सैँ घण्टा, एक्सरे सेवा, इमरजेन्सी सेवा, अप्रेसन सेवा, हड्डीको अप्रेसन हप्तामा दुई दिन, सर्जिकल अप्रेसन, भर्खर जन्मेको बच्चाको उपचार, योगाहल बनाउने पक्रियामा छ भने शव राख्नका लागि चारवटा फ्रिजको व्यवस्थाका साथै डायलायसिस सेवा आदि ।
उपकरण प्रयोगबिहीन अवस्था छन् भन्ने छ नि ?
अहिले त्यस्तो छैन्, भेन्टिलेटरको कुरा हो भने त्यो अहिले पहिलेको कुरा हो । अहिले आइसियु सेवा पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा केही दिनमै सञ्चालमा आउँदै छ भने एनआइसीयु सेवा सञ्चालन भइरहेको रहेको छ । इन्डोस्कोपी, डायलायसिस, सर्जरी नियमित नै छ ।
जनशक्ति व्यस्थापनमा चुनौती छ ?
केही तपाईले भनेको जस्तो पक्कै छ, थोरै जनशक्तिमा धेरै सेवा दिनु पर्दाखेरी केही समस्या छ । अर्को कुरा के भने धेरैजसो डाक्टरको बसाई घोराही भएका कारण पनि कहिलेकाहीँ समस्या हुने गरेको छ । अहिले डाक्टरलाई फेरि १०–५ वा अरु ठ्याक्कै भन्ने पनि हुँदैन् ।
तर डिउटी सिस्टम मिलाउन केही समस्या देखिन्छ । यसका लागि हामीले सकेसम्म डाक्टरको कोठा तुलसीपुरमै व्यवस्था गरिदिने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ ।
दरबन्दीअनुसार जनशक्ति छ ?
अहिले चिकित्सक त दरबन्दी अनुसार नै हुनुहुन्छ । हामीसँग नर्सको अभाव देखिएको छ । त्यो पनि अस्पतालको स्तरोन्नती भएपछि पूर्ति हुने विश्वास छ । अहिले ५० शैंयाको अस्पतालमा ९० शैंयाको बिरामीलाई सेवा दिँदा केही समस्या, अर्थात् जनशक्ति अभाव देखिएको छ । तर त्यो पनि विस्तारै समाधान हुन्छ कि भन्ने आशा छ ।
अस्पतालको स्तरोन्तती गर्ने योजना छैन् ?
छ, अहिले अस्पतालाई छ सय बेडको अस्पताल बनाउने तयारी छ । केन्द्र सरकारले यसलाई स्तरोन्तती गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढेपनि त्यो समय लाग्ने देखिन्छ । कम्तिमा पनि सात÷आठ वर्षसम्म समय लाग्ने देखिएको छ । अहिले तत्कालका लागि अस्पताललाई एक सय ५० देखि दुई सयसम्मको बेड बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
क्षेत्र फराकिलो बनाउने के छ योजना ?
अहिले अस्पताल करिब चार विगाह क्षेत्रफलमा छ । अस्पतालको स्तरोन्नती भएपछि क्षेत्रफल स्वतः बढ्ने छ । अहिले अस्पतालको नाममा करिब आठ बिगाह जग्गा रहेकोमा करिब चार बिगाह क्षेत्रफल मात्रै सीमित रहेको छ । बाँकी चार विगाह क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको छ ।
अतिक्रमित जग्गालाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ । अस्पताल सबैको लागि हो भन्ने उद्देश्यका साथ हामी सबैले बुझेपछि ति जग्गा पक्कै फिर्ता हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।
कोरोना विषेश अस्पतालमा पनि नेतृत्वमा हुुनुहुन्छ, दुई ठाउ“को काम कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?
हो, एउटा व्यक्ति दुई ठाउँमा काम गर्दा केीिह जटिल त भई हाल्छ, तर व्यवस्थापन गरेको छ । चैत ११ गतदेखि अस्पताल स्थापना भएपछि हामीले अहिलेसम्म त्यस कोरोना अस्पतालमा करिब पाँच बढी बिरामीको उपचार गरिसक्यौँ ।
अहिलेसम्म सबैको प्रयासले बिरामीले मृत्युवरण गर्नुपरेको छैन । शुरुमा केही जटिलता आएपनि अहिले सहज बन्दै गएको छ । यो प्रयासमा सबैको अमूल्य साथ रहेको छ । जनतादेखि सरकार सबैको अमूल्य सहयोगले नै हामीले गरेका काम सफल भएका छन् ।
शुरुमा बिरामी नै ल्याउने बेलामा केही समस्या आएपनि पछिल्लो समय त्यस्ता किसिमका जटिलता आएका छैनन् । अहिले भेन्टिलेटर सेवा पनि शुरु भएको छ । अहिले सबैको साथ सहयोगले अस्पतालले सोचे अनुसार अघि बढाएका छौ । यहि बीचमा प्रदेश सरकारबाट पदक समेत प्राप्त भएको छ । त्यो पदक सेवा र कामले नै दिलाएको जस्तो लाग्छ ।
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुधारका लागि के गर्नुपर्ला ?
पक्कै पनि स्वास्थ्यको सुधार बिना अन्य विकास निर्माणका काम असम्भव नै छ । त्यसैले स्वास्थ्य सुधारमा विभिन्न कामहरु गर्नुपर्ने छ । विषेशगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउनु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।
पहिलेभन्दा केही सुधार आएपनि अझै बजेटको केही भाग बढाएर काम अघि बढाउन सहज हुन्छ । जुन हिसावले पहिले चार प्रतिशत बजेट बिनियोजन हुने गरेको थियो । अहिले नौ प्रतिशतमा पुगेको छ । अझै पनि बजेट बढाएरमात्रै विभिन्न किसिमका सुधारात्मक काम गर्न सकिन्छ ।
बन्द भयो थारू नमुना ग्राम
सबै पालिकामा विद्युत विस्तार